Archive du 20171125
Fifidianana filoham-pirenena Haroso amin’ny volana mey 2018 ?
Miha mazava ankehitriny ny paikadin’ny fitondrana HVM fa mety hotanterahana mialoha ny fotoana ny fifidianana filoham-pirenena, raha ny feo mivoaka avy ao an-dapa ao.
Antenimieram-pirenena Malagasy Maty hasina tanteraka
Maty hasina tanteraka ny antenimieram-pirenena Malagasy noho ny ataon’ireo solombavambahoaka miasa ao aminy.
Didy jadon’ny fanjakana HVM Tsy hanaiky lembenana ny antoko maro
Na eo aza ny fandrisihan’ny mpiara-miombon’antoka amintsika, toy ny PNUD amin’ny fanatanterahana amin’ny hisian’ny fifampidinihana sy ny fifanarahan’ny samy mpanao politika mialoha ny fifidianana, dia tsy miraharaha izany ny fanjakana ankehitriny.
Fifidianana 2018 - Fikambanana Za’Gasy “Mila faritana ny vola azo ampiasaina”
Ny olona tokony hitondra firenena, tsy filoha ihany fa ireo te hofidiana, dia tsy maintsy manana traikefa ary tsy misy olona tokony hitantana ny firenena raha tsy efa avy nisedra fifidianana, ka nahavita an-tsakany sy an-davany ny vanim-potoana nametrahana azy tamin’ny toerana nifidianana,
Izahay tsy bado a !
Miarahaba jean a.Efa ao anaty ambiansy mafana tanterakka izanyianareo amin’izao fotoana a.Mandeha ny fivoriana, ny fitokanana, ny fizarana zavatra etsy sy eroa, mandeha daholo izay mandeha rehetra.
Olan’ny MICTSL ao Toamasina Manambana hitokona ireo “Transitaires”
Manome fe-potoana herinandro, izany hoe 7 andro ny orinasa Mictsl misahana ny fandraharahana ny kaontenera ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ireo vondron’ny mpandraharaha mpamoaka entana na “Transitaires”
Famahana ny olan’ny ady tany Hotohizana ny fifampiresahana
Tsy hitsahatra intsony ny firesahana momba ireo karazana ady tany eto amintsika izay efa saika mihatra amin’ny isam-batan’olona mihitsy ankehitriny.
Monique Rakotoanosy Nahazo ny diplaoma ambony HDR
Nahazo ny mari-pahaizana HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) ny mpampianatra mpikaroka Rakotoanosy Monique, Filohan’ny Filankevi-pitantanan’ny ONG Ilontsera (Ivom-pandalinana ny Tontolon’ny Serasera marolafy eto Madagasikara).
« Sapeurs Pompiers Vendée France » Hamerina ny fiaraha-miasany amin’Antananarivo
Mitohy ny fiaraha-miasa sy ny fifanakalozana traikefa amin’ny avy any ivelany ny sampan-draharaha mpamonjy voina eto amin’ny Kominina Antananarivo. Nihaona tamin’ny Sekretera Jeneralin’ny CUA, Atoa Razafimahefa Heriniaina, izay nisolo tena ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana,
Tsenan’ny Petite Vitesse Fanatsarana no atao fa tsy fandroahana mpivarotra
Hisy amin’io herinandro ambony io ny fanazavana ara-teknika ataon’ny tompon’andraikitra eny anivon’ny boriborintany sy ny kaominina Antananarivo Renivohitra momba ny fanatsarana heverina hatao ao amin’ny tsena Petite Vitesse.
Herisetra mahazo ny vehivavy Mbola maro be ireo tsy sahy manatona “centre d’écoute”
Ny 70 %-n’ny vehivavy dia hiharan’ny herisetra avokoa saingy ny endrika hisehoany no samihafa. Mbola betsaka amin’izy ireny anefa no tsy sahy manatona ivontoerana fandraisana fitarainana.
Ramatoa 60 taona Matin’ny toaka, nitsirara teny amoron-dalana
Nahitana olona maty indray tao Mahazoarivo Antsirabe ny atoandron’ny alakamisy 23 novambra 2017 lasa teo, tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany.
Kaominina Ankiranomena Fenoarivobe Tsy hita izay fandrosoana, mitaraina ny mponina
Efa ho telo taona izao tsy misy endri-pampandrosoana hita taratra mihitsy eo anivon’ny kaominina ambanivohitra Ankiranomena, distrikan’i Fenoarivobe.
Tolotra fandefasana vola “E-Mandat Vaovao” Tafapetraky ny Paositra Malagasy ny any Mahajanga
Tanteraka teo anoloan’ny biraon’ny Paositra Malagasy tao Mahajanga ny 23 novambra 2017, ny famoahana ofisialy ny tolotra vaovao fandefasana vola amin’ny fomba nomerika EMV na ny “E-mandat vaovao”.
Cosfa Analamanga sy Fosa Junior Boeny Hotoloran’ny Telma sy Fmf 3.000.000 Ar izay mandresy
Fantatra tamin’ny fitafan’ny tompon’andraikitry ny serasera, Elly Razafinimanga sy ny tale teknikan’ny FMF, Debon Jean François ary tompon’andraikitry ny marketing sport ao amin’ny Telma,
Rugby à XV rahampitso alahady Hangotra ny kianjan’i Makis sy Malacam
Samy hahitana lalao rugby goavana tahaka ny mahazatra ny eny amin’ny kianja Makis eny Andohatapenaka sy ny etsy amin’ny kianja Malacam Antanimena rahampitso alahady 26 novambra 2017.
Ho avy ny fahagagana !
Efatra taona izao no nitondran’ny fanjakana HVM antsika, ka raha fiovana sy fanarenana ny firenena no nandrasana dia vao mainka ny ratsy kokoa taorian’ny fitondran’ny mpanongam-panjakana no nisy.
Mponin’i Betafo Antsirabe “Havereno tsy misy hatakandro ny rano fisotro madio any aminay”
Tsy mbola misy mandeha amin’ny laoniny ny fitantanana sy fandaminana ny fampandehanana ny rano fisotro madio ao amin’ny Kaominina Ambonivohitra Betafo Antsirabe tato anatin’ny volana maromaro izay.
Tsenaben’ny sakafo sy ny lakozia Hampihaonina mivantana ny mpamokatra sy ny mpanjifa
Ny 30 novambra ka hatramin’ny 03 desambra ho avy izao indray no hotontosaina etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina ilay tsenaben’ny Sakafo sy ny lakozia andiany fahavalo,
Orinasa Startimes Hamalifaly ny fianakaviana Malagasy mandritra ny fety
Iray volana latsaka sisa dia hianoka tanteraka ao anatin’ny fankalazana ny fetin’ny noely sy ny faran’ny taona isika.
Tarika Radjur Namoaka ny rakikirany voalohany « Aingan’i Dada »
Vao sivy taona Randrianindrina Zafitsiresy dia efa nilalao gitara niangaly ny ba gasy niaraka tamin’ny tarika Lefona. Tsy nijanona teo ny fankafizany ny mozika Malagasy, antony nanosika azy namorona vondrona iray tamin’ny taona 1979 saingy niparitaka.
Alaotra Mangoro Goragora ny fandriampahalemana
Olona iray namoy ny ainy, iray hafa naratra mafy. Io no vokatry ny fanafihan-jiolahy tamin’ny toeram-pivarotana iray ao Ambatondrazaka ny alin’ny alarobia 22 novambra hifoha ny alakamisy 23 novambra tokony tamin’ny 1 ora maraina.